Oktobra 2019 - "Maniria ny haminany". - FJKM Québec - Canada
Oktobra 2019 – “Maniria ny haminany”.
1 octobre 2019 by Njaka Ramanandafy
“Maniria ny haminany”
Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Tsy zava-baovao ho an’ny mpino akory ny fitaomana azy haminany fa efa hatrany am-boalohany no niaina izany izy ireo. Ao amin’ny Baiboly rahateo dia mibahan-toerana ao ny resaka faminaniana sy mpaminany.
Ireto no tsara marihina amin’izany:
Ny teny hoe “faminaniana” dia midika hoe “vavan’Andriamanitra miteny”. Izany hoe, mindrana ny vavan’ny mpaminany Andriamanitra hanaparitaka ny Teniny sy ny Sitrapony. Mpizara ny Tenin’Andriamanitra sy ny sitrapony ny atao hoe Mpaminany.
Noho izany ny faminaniana tiana ho lazaina eto dia tsy hoe famantarana ny ho avy toy ny mahazatra antsika fa “fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra manoloana ny trangan-javatra lasa, na efa nisy, dinihina amin’izay miseho ankehitriny ka hahafantarana ny làlan’kaleha amin’ny ho avy”.
Koa aoka tsy ho mpaminany sandoka isika (Jeremia 14: 14, 15): hilaza izay heverintsika sy eritreretintsika ihany, na haminany hitadiavana tombontsoa ho an’ny tenantsika fotsiny, na maniry ny halaza sy hanangana Fiangonana ka mamorona faminaniana ho arahin’ny olona, na mamoron-dainga hanasoasoa olona hisarihana azy na hitsaràna azy ho mpanao meloka ka hampahoriana azy, (Ezekiela 21: 34)
Ny faminaniana marina andrasan’ny Tompo amintsika dia: Mizara ny sitrapon’ny Tompo Jesoa hapandroso ny fiainan’ny rehetra sy ny Fiangonana izay hiantefany (I Kor 14: 4); Tsy ho mpaminany mitondra henatra sy mpamitaka na mpanararaotra ny hafa (Zakaria 13: 4); Mpaminany milaza ny zava-misy marina fa tsy hanarontsarona sy handamindamina izany (Ezekiela 13: 9).
Koa “Maniria ny haminany isika rehetra ka ho mpitory sy mpizara ny Tenin’Andriamanitra izay niantso sy naniraka antsika.
Mirary soa ho antsika rehetra amin’izao volana oktobra izao ary ho tanteraka amintsika ny voalzan’ny I Sam 10: 6 hoe “Ary hilatsaka aminao ny Fanahin’I Jehovah, ka hiara-maminany Aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao”.